January 12, 2021 – Voice of Myanmar
အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူးကာ တောင်အဆင်းမှာ တိမ်းမှောက်လို့ လူ ၂ ဦးသေ ၁၅ ယောက် ဒဏ်ရာရ
ဇန်နဝါရီ ၁၃ – ၂၀၂၁ ကိုတိုးကြီး(VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကနီမြို့နယ်နဲ့ ယင်းမာပင်မြို့နယ်အကြား ကပိုင်ကျေးရွာရဲ့အနောက်ဘက် ထိုးတောင်ကွေ့အနီးမှာ မနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် ညနေ ၄ နာရီက အလောင်းတော်ကဿပ ဘုရားဖူး အဆင်းကားတစ်စီး ဘရိတ်ပေါက်ပြီး ကွန်ကရက်လမ်းပေါ် တိမ်းမှောက်ခဲ့ပါတယ်။ တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ကားပေါ်ပါလာတဲ့ လူ ၂ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၅ ယောက် ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ယင်းမာပင်မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ ” ဘုရားဖူးရာသီရောက်တာတော့ ဟုတ်တယ် ၊ ကိုဗစ်ကြောင့် ဖွင့်ခွင့်မပြုသေးဘူး ၊ အခုမှောက်တဲ့ ဘုရားဖူးကားက ဘုတလင်မြို့နယ် နတ်ရွာကလို့ သိရတယ်၊ Skat အမျိုးအစား အပြာရောင် ၆ ဘီး ယာဉ်ဖြစ်တယ်၊ ယာဉ်မောင်းသူက နေရာမှာတင်သေဆုံးပြီး ၃ ယောက်ကတော့ အထူးစိုးရိမ်ရတယ် ၊ စိုးရိမ်ရ…
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်က အရွယ်မရောက်သူ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့အမှု အထက်ဌာနကို တိုင်ကြားမယ်
ဇန်နဝါရီ ၁၃-၂၀၂၁ ခွန်ခန့်သူ(VOM) ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်မှာ အရွယ်မရောက်သူ အဓမ္မပြုကျင့်တဲ့အမှုကို အထက်ဌာနထိ ဆက်လက်တင်ပြတိုင်ကြားသွားမယ်လို့ မိခင်ဖြစ်သူက ပြောပါတယ်။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်၊ ထီလုံနယ်မြေရဲစခန်းက အလိုမတူဘဲ အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့သူ မောင်ဝင်း (အသက် ၁၈ နှစ် ၁ လ)ကို အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ် အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာက အသက်မပြည့်တဲ့ လူငယ်အနေနဲ့ အမှုပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အပေါ် မိခင်ဖြစ်သူက မနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ရက်နေ့ တရားရုံးချိန်းအပြီးမှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထီလုံကျေးရွာမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၄ ရက် မနက်ပိုင်းက အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ၃ တန်းကျောင်းသူဟာ ကျေးရွာအနီး လယ်ကွင်းမှာ ဆိတ်ကျောင်းနေရင်း ထန်းပင်အောက်နားနေချိန် တစ်ရွာတည်းနေ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ မောင်းဝင် (ခ) စတီးရား(အသက် ၁၈ နှစ် ၁ လ)က နွားကျောင်းနေရာကို ရောက်ရှိလာပြီး…
တောင်ကြီးမြို့မှာ လူအားလုံး ကိုဗစ်ပိုးရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးနိုင်တော့မယ်
ဇန်နဝါရီ ၁၃-၂၀၂၁ နေနန်းနွယ်(VOM) တောင်ကြီးမြို့မှာ လူတစ်ဦးကို ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀နူန်းနဲ့ ကိုဗစ်ပိုးရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ တောင်ကြီးမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ “အခုလက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့က လမ်းညွှန်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းဖျင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က အများစစ်မယ့် နေရာကတော့ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအဟောင်း ၊ ယခင်တုန်းကတော့ ခရိုင်ကော်မရှင် ရုံးသုံးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့၊ အဲ့ဒီနေရာကို စစ်ဆေးရေးဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စနိုင်အောင်လို့ ရည်မှန်းပြီး ပြင်ဆင်နေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အလွန်ဆုံး တစ်ရက်ကို အယောက် ၁၅၀ စစ်ပေးနိုင်ဖို့ လက်ရှိမှာ ချိန်ထားပါတယ်၊ လူ ၁၅၀ ကို လူစူလူဝေးမဖြစ်ပဲ စစ်ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်နေပါတယ်၊ အထဲမှာ လူ အယောက် ၁၅၀ ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ တံခါးပိတ်ထားလိုက်မှာပေါ့၊ နောက်နေ့ကျမှပဲ ကျန်တဲ့အဖွဲ့ကို ဆက်စစ်ပေးမှာပေါ့၊ အထဲကို…
မုံရွာ-ဇန်နဝါရီ ၁၂ ၊ ၂၀၂၁ ကိုတိုးကြီး (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့ ချမ်း​မြဝတီရပ်ကွက် ၊ နယ်မြေ ၆ ၊ မြို့ပတ်လမ်း ဆွမ်းအုပ်အဝိုင်း မြောက်ဘက်အနီးမှာ ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၂ရက်နေ့ခင်း ၂ နာရီက အုပ်စုဖွဲ့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလို့ လူသေဆုံး ၊ ဒဏ်ရာရတာတွေရှိတယ်လို့ မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းက သိရပါတယ်။ ” ခြံစည်းရိုးခတ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂ ဖက်စကားများ ရန်ဖြစ်တာကနေ အပြန်အလှန် လေးခွနဲ့ပစ် ဓားနဲ့ခုတ်ကြတာဖြစ်တယ်၊ ဓားခုတ်ခံရတဲ့ လူနာ ၂ ယောက်က သတိမရသေးဘူး “လို့ မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီ လူနာ ၇ ယောက်အနက်က သတိမရသူ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် ကျော်ဇင်ဝင်းနဲ့ အသက်ကို ၃၃နှစ်အရွယ်မိုးဆွေဆိုသူဟာ မုံရွာဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ ဆေးကုသနေစဥ်…
ဇန်နဝါရီ ၁၂ -၂၀၂၁ ကိုတိုးကြီး (VOM) စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း မီးလောင်မှုကြောင့် ငွေကျပ် သိန်း ၇ ထောင်ကျော်အထိ ဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနကနေ သိရပါတယ်။ “ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ မှာ မီးလောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်အကြီမ်ရေပေါင်း (၂၂၆) ကြိမ်ရှိတယ် ၊ တစ်နှစ်တာကာလရဲ့ မီးလောင်ဆုံးရှုံးတဲ့ တန်ဖိုးက ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း (၇၅၅.၅၀) ဖြစ်တယ်”လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်နိုင်က ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း မီးလောင်မှု (၂၂၆) ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့် လူနေအိမ် ၃၃၅ လုံး ၊ မီးဘေးသင့် လူဦးရေ ၈၁၈ ဦး ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ၃၈ ဦးနဲ့ သေဆုံးသူ ၈ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေ…
ဦးဝီရသူကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့ သံဃာတော်တွေနဲ့ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေတောင်းဆို
ဇန်နဝါရီ ၁၂-၂၀၂၀ အေးချမ်းသူ(VOM) နိူင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ ၁၂၄(က)နဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ ဗီဒီယိုကွန်းဖရန့်(စ်)နဲ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ သံဃာတော်အပါး ၃၀နီးပါးနဲ့ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ၅၀ခန့်ဟာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့ လာရောက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုရာမှာ ဦးဆောင်တဲ့ ဆရာတော်ဦးတေဇဝံသက “ပြည်သူလူထုရှေ့မှောက်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တရားစီရင်ခြင်းမခံရပါဘူး။ ဗီဒီယိုကွန်းဖရန်း(စ်)နဲ့ ရုံးထုတ်နေတယ်။ တရားသူကြီးက သူပြောချင်တာပြောသွားတယ်။ ဆရာတော်က ချေပခွင့်မရှိဘူး။ပြောချင်တာပြောပြီး နောက်တစ်ပတ်ရုံးချိန်းပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးထုတ်စေချင်တယ်”လို့ မိန့်ကြားပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဝီရသူအမှုမှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး လူအခွင့်အရေး၊ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာကြောင့် လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အတွက် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပေးစေချင်တယ်လို့ ဆရာတော်ဦးတေဇဝံသက မိန့်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးဝီရသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄(က)နဲ့ ၂နှစ်နီးပါး ပုန်းအောင်းနေရာကနေ ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာ လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲစခန်းမှာ လာရောက်အဖမ်းခံတဲ့ ဆရာတော်ဦးဝီရသူကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာတော့ ဗီဒီယိုကွန်းဖရန့် (စ်)…
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wang Yi ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ – ၁၂-၂၀၂၁ ကိုထွန်း(VOM) တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Wang Yi ကို ဒီနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက် မနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် ၊ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နဲ့ တပ်မတော်အရာရှိကြီးတွေ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ အတူ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Qian Keming၊ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wu Jianghao၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chen Hai နဲ့ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာ မနေ့…
ဇန်နဝါရီ ၁၂-၂၀၂၁ အေးချမ်းသူ(VOM) ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ တပ်မတော်ထောက်ခံပဲွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အခြေခံလူတန်းစားဘဝတိုးတက်မြှင့်မားရေးပါတီ(YDP)မှ တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးကို ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးက ငြိမ်းစုစီဥပဒေနဲ့ ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ငြိမ်စုစီပုဒ်မနဲံ အရေးယူဆောင်ရွက်ခံရသူဒေါ်မိုးမိုးခိုင်က “အစ်မကို အနောက်ပိုင်းခရိုင်ကော်မရှင်က ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ-၂၀နဲ့ အမှုဖွင့်တယ်၊ အစ်မ အဆင့်ဆင့်တင်ထားတာလေ ငြိမ်းစုစီတင်တာကို အမှုဖွင့်တာ၊ တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲကို ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ စေခိုင်းချက်အရ အမှုဖွင့်ခဲ့တာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဒေါ်အေးအေးခိုင်ကို အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းနိူင်ဟာ ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့ ဇန်နဝါရီ ၁၁ရက်နေ့ညပိုင်းက (ပ) ၇/၂၀၂၁၊ ငြိမ်းစုစီပုဒ်မ-၂၀ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းကနေ သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြှင့်မားရေးပါတီမှ ဦးဆောင်ပြီး တပ်မတော်ထောက်ခံပဲွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူဦးရေ ၂၈ဦးသာ စာတင်ခဲ့ပေမယ့် ဝန်းရံသူ…
NLD နဲ့တွေ့ဖို့ကိစ္စ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ရုတ်သိမ်း
ဇန်နဝါရီ ၁၂-၂၀၂၁ ကောင်းလက်ျာ(VOM) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLDပါတီနဲ့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံကြဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် နေရာရွေးချယ်မှု အဆင်မပြေတာအပြင် တိုင်းရင်းသား ပါတီ‌လေးတွေကို လေးစားမှုမရှိဘူးလို့ယူဆ‌ခဲ့မိလို့ တွေ့ဆုံဖို့ရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP)အတွင်းရေးမှူး ခူးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။ ” တွေ့ဆုံကြဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ၂၄ ကတည်းက သိထားတယ်။ ဒါကြောင့် တရားဝင်တွေ့ကြမယ်ဆို ဖုန်းနဲ့ဆက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ စာနဲ့ပေနဲ့ဖိတ်ကြားဖို့ကြိုတင်မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအပေါ် သူတို့လေးစားမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားရလို့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲဖို့ မတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာပါ”လို့ ခူးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။ NLD ပါတီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ခေါင်းဆောင် ၅ ဦးကို ကြိုတင်ရွေး‌ချယ်ထားတဲ့အပြင် ‌ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုသာ ဦးတည်‌ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်ကိစ္စတွေကို တစ်ဖက်ပါတီက ကမ်းလှမ်းလာမှသာ ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ NLD ပါတီမှ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးနဲ့…
အမေရိကန်တစ်ဝန်းမှာ လက်နက်ကိုင်ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ FBI သတိပေး
ဝါရှင်တန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂-၂၀၂၁ မျိုးဆက် (VOM) ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခြင်းမပြုမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အမေရိကန်တစ်ဝန်းမှာ လက်နက်ကိုင်ဆန္ဒပြမှုတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ FBI က သတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီ၌ သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေဟာ ပြည်နယ် ၅၀ ရှိ လွှတ်တော်တွေနဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ စုဝေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ FBI ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမေရိကန်လွှတ်တော်ပြင်ပမှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုဖို့အတွက် ကြောက်ရွံ့နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ မစ္စတာဘိုင်ဒင်က ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်မှာ သတင်းထောက်တွေကိုပြောပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ရွေးကောက်ခံဒု-သမ္မတ ကာမာလာဟားရစ်တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံသူအစွန်းရောက်တွေ လွှတ်တော်ကို ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီး သီတင်းနှစ်ပတ်အကြာမှာ အဲ့ဒီအဆောက်အအုံပြင်ပမှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်မှာပြုလုပ်မယ့် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအတွက် အထူးစစ်ဆင်ရေးတွေကိုစတင်ဖို့ အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနကို ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန…